Ubuntu zvakare inomira kuve ne32-bit PPC kuvaka | Linux Vakapindwa muropa
Chiziviso chepamutemo cheUbuntu chave nezuro uye zvinoita kunge hachina kukanganisa vashandisi vazhinji. Steve Langasek akataura kuti iyo inotevera vhezheni yeUbuntu, Ubuntu 17.04 haizove neiyo ISO mufananidzo we32-bit PPC kuvaka pamwe neshanduro dzeramangwana dzeUbuntu.
Chinhu chinogumisa imwe yeiyo yekare mifananidzo yeUbuntu yanga iri mukuburitswa kwese pamwe neiyo 32 Bit uye 64 Bit vhezheni. Iyi sarudzo inonyanya kukonzerwa nezvikonzero zviviri, kunyangwe iyo isingazokonzere iyo 64-bit PPC kuvaka kukanganwika kana vashandisi ve32-bit Ubuntu PPC kuti varege kugashira.
Izvo zvikonzero nei Ubuntu Nharaunda nevagadziri vayo varega kugadzira iyi ISO mufananidzo ndeiyi: Debian akarega kutsigira saka Ubuntu, kuve yakavakirwa paDebian, zvaizonetsa kuwana mufananidzo uyu. Asi pamusoro pezvose, chikonzero chechipiri ndechekuti ivo havana kuwana vashandisi vanoshanda vepuratifomu.
PPC ichave ichiri paUbuntu asi chete iyo 64-bit vhezheni
Mune yekupedzisira UOS iyo yakaitwa mwedzi wapfuura zvakakurukurwa kuti uenderere mberi neiyi platform, iyo yavakatsvaga vashandisi vanoshanda vanogona kubatana pamwe nekusimudzira kana kupa maonero avo. Kunyangwe kuchine vashandisi pachikuva ichi, chokwadi ndechekuti havana kuwana rutsigiro rwakaringana kuchengetedza vhezheni, saka vakafunga kusiya chikuva.
Kunyange zvakadaro Vashandisi vePPC havazokwanise kuisa zvinyorwa zvitsva zveUbuntu, chokwadi ndechekuti shanduro dzekare dzicharamba dzichigamuchira tsigiro kusvika inotevera 2021 mushure meizvozvo ivo vanorega kuigamuchira uye vanofanirwa kubva papuratifomu kana kuti vanofanirwa kushandura iyo inoshanda system. Kunyangwe panosvika 2021 panogona kunge pasisina imwe 32-bit chikuva, kana PPC kana kunyange AMD Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Ubuntu zvakare inomira kuve ne32-bit PPC kuvaka
Ini handizive chii chako chiitiko, asi yangu 32-bit pc haina kukanda Ubuntu kwemakore mana, yakawanda zviwanikwa zvinodiwa.
Pane yangu 32byt netbook inoshanda zvakanaka. Asi rega kushandisa sisitimu nekuti pese painotaridzika kunge windows nema software uye marezenisi nyaya uyezve nekuda kweshanduko dzakanyanya seizvi. Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kuumbiridza mamwe ehurongwa kernels uye nekuisanganisira iyo mukuyeuchidza.
Ini ndichafanirwa kudzokera kuWindows: c
Varume, iyi ichava mariro ari pedyo